ငါးများများစားပါ နှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ထိရောက်သော ငါးစားနည်း။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ငါးများများစားပါ နှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ထိရောက်သော ငါးစားနည်း။
ငါးများများစားပါ နှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ထိရောက်သော ငါးစားနည်း။
Posted by ခင်ခ on Nov 1, 2012 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness, My Dear Diary | 47 comments
ငါးလေးလို့ဆိုတဲ့ ငါးက ငါးသလဲထိုး လို့လည်းခေါ်ကြတယ်၊ ခေါင်းတစ်ရာသားလေးတွေလို့လည်း ခေါ်ကြ တယ်၊ တစ်ချို့ရယ်စရာပြောတာရှိတယ် တစ်ခါက ခေါင်းတစ်ရာငါးစားရင် ချမ်းသာသက်ရှည်တယ်ဆိုလို့ ကြက်၊ ၀က်၊ ဘဲငန်းများကို အကောင်တစ်ရာသတ်ပြီး ဟင်းပွဲတည်သည့် သူဌေးသားကတော့ မွဲသွားပါတယ်တဲ့၊ ခေါင်းတစ်ရာသားဆိုတာ ရှေးလူကြီးတွေပြောခဲ့တာ ဈေးသက်သာသည့် ငါးသလဲထိုး ငါးကို များများစားပါလို့ တင်စားပြောခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ဖတ်ဖူးပါတယ်။
ငါးသလဲထိုးမှာ ရေထဲတွင် အလွန်လျှင်မြန်စွာ ကူးနိုင်သောငါးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မြန်မာတိုင်းရင်းဆေး ဆရာများ အဆိုအရ လေဖြတ် ဝေဒနာသည်များကို အာရုံကြောများ ပြန်လည်ရှင်သန်စေရန် အတွက် ငါးကလေးအိုးကပ် စားပေးသင့်ကြောင်း ညွှန်းဆိုကြပါတယ်၊
ငါးအမျိုးမျိုးတို့အပေါ် တိုင်းရင်းဆေးရှု့ထောင့်မှနေပြီး ဒီလိုခွဲခြားပြောပါတယ်၊ ငါးခူ၊ ငါးကျည်း၊ ငါးပြေမ၊ ငါးသလဲထိုး စသည်တို့မှာ တက်စာဖြစ်သည်။ (တေဇောနှင့်ဝါယော) ဓာတ်ကိုကြွစေသောအစာ ဖြစ်သဖြင့် ဆေးကုသောအခါ (ပထ၀ီနှင့်အာပေါ) ဖွဲ့သဖြင့် လေးလံထိုင်းမှိုင်းသူ၊ မတက်ကြွသူ၊ အကြောဆိုင်းသူ၊ လေဖြတ် သူများကို စားစေလေ့ရှိပါတယ်၊ ငါးမြင်း၊ ငါးတန်၊ ငါးပတ်တို့မှာ သက်စာ (သွေးလေးစေသောအစာ) များဖြစ်ပြီး ဓာတ်သဘောအရ (ပထ၀ီနှင့်အာပေါ) ဦးဆောင်သောအစာများ ဖြစ်သည်။ အစာကြေခဲသဖြင့် ရောဂါသည်နှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ ချင့်ချိန်စားသင့်ပါတယ်၊ ငါးကြင်းသည် လူတို့အစားများသော မွေးမြူရေးငါးဖြစ်ပြီး အဆီ များသောငါးမျိုးတွင်ပါဝင်၍ လူတို့နှင့်တည့်သည်၊ တိုင်းရင်းဆေးကျမ်းတွင် လူတို့အတွက် မြတ်သောအသား ငါးဟုပင်ဆို၏၊ လေကိုနိုင်သည် သည်းခြေအားကောင်းစေသည် ခွန်အားကိုဖြစ်စေသည် ခံတွင်းပါးရွဲ့စေသော လေရောဂါ မျက်လုံးစွေစောင်းသော လေရောဂါတို့ကိုနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်၊ ငါးကြင်းဖြူနှင့် မျက်ဆန် နီနှစ်မျိုးစလုံး အာဟာရတူ အကျိုးတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
ငါးသလောက်မှာလည်း လူကြိုက်များသောငါး အစားများသောငါးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အရိုးများသဖြင့် ပေါင်းစားလေ့ရှိ ကြပါတယ်၊ ငါးသလောက်သည် ဆူဖြိုး၏ ဆိမ့်၏ တက်၏ သွေးတက်စာဖြစ်သော်လည်း ဖောရောင်သောရောဂါ လေနာရောဂါကိုနိုင်စေသော အနိသင်ရှိ၍ ၀မ်းကျနာ(၀မ်းကိုက်)ခြင်းကို နိုင်ကြောင်း တိုင်းရင်းဆေးကျမ်းများ တွင်ဖော်ညွှန်းကြပါသည်၊
အခုခေတ်တွင် လေဖြတ်သူများများပြားလာပြီး နှလုံးနှင့်လေဖြတ်ဝေဒနာခံစားမှု့များလာကြောင်းလေ့လာမှု့ အရသိရပါတယ်၊ လေဖြတ်သူအတော်များများမှာ နှလုံးကြောင့် လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်းနှင့် ဆီးချိုသွေးတိုးရောဂါ တို့ကြောင့် နာတာရှည်လေဖြတ်ခြင်းတို့ အဖြစ်များနေပါတယ်၊ ထောပတ်၊ မလိုင်၊ နွားနို့၊ နွားနို့ခဲ၊ ဒိန်ခဲ စတဲ့ ချိုဆိမ့်အီသောအစာကြိုက်သူများ၊ အမဲသား၊ ပုဇွန်ထုပ်ကြီး၊ ငါးမြင်း၊ ငါးတန်၊ ငါးရောင်၊ ငါးထွေ၊ ငါးရွေး၊ ငါးဥများ များစွာစားခြင်းမှာ ဆီးချိုနှင့် သွေးတိုးရောဂါကို ဖိတ်ခေါ်နေသူများဖြစ်ပြီး အသက် ၅၀ ကျော်လျှင် ထိုအစား အစာများကို ရှောင့်သင့်ပါသည်။
ဒန်ပေါက်၊ အုန်းထမင်း၊ ရေခဲမုန့်များကို မက်မောစွာ စားသုံးလေ့ရှိသူများလည်း ဆီးချို၊ သွေးတိုးရောဂါနှင့် နောက်ဆက်တွဲလေဖြတ်ခြင်း ဝေဒနာကိုရနိုင်ပါတယ်၊ ကြက်၊ဘဲ ဆိုလျှင်လည်း အရေခွံကို ရှောင်သင့်ပြန်ရော၊ ထိုအရေခွံအစားများခြင်းသည် အဆီတက်၍ မွေးညင်းပေါက်များပိတ်ကာ ချွေးမထွက်သောရောဂါ တိုင်းရင်း ဆေးအခေါ် အာကာသပိတ် စေသောအစာဟုသတ်မှတ်ပါတယ်၊ အာကာသပိတ် ချွေးမထွက်ခြင်းကြောင့် အသားပပ်ခြင်း၊ အသားအက်ကွဲခြင်း၊ မွေးညင်းများ ကျွတ်ခြင်း၊ အသားအရေကြမ်းတမ်းမွဲခြောက်ခြင်း၊ ကိုယ်အပူချိန်တက်ခြင်း၊ သွေးတိုးတက်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အဲဒီတော့ လေဖြတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ခေါင်းတစ်ရာသားခေါ် ငါးသလဲထိုးလေးများကို ဆီခြောက် ခြောက်ဖြင့်ချက်ပြီး နံနံပင်လေးအုပ်ကာထားသောဟင်းကို မြန်မာတို့က “ငါးကလေးအိုးကပ်ဟင်း´´ ဟုခေါ် ကြပြီး မက်မက်မောမောစားသုံးတတ်ကြပါတယ်၊ ဆင်းရဲသား၊ လယ်သမားများ မြစ်နား ချောင်းနားနေထိုင်သူ များက ပိုပြီးစားသုံးကြသလို ထိုသူတို့မှာ လေဖြတ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု့နည်းကြောင်း လေ့လာစမ်းစစ်မှု့အရတွေ့ ရပါတယ်၊ ငါးသလဲထိုး ငါးလေးများသည် သလိပ်နာ သည်းခြေနာ အညောင်းရောဂါတို့ကို နိုင်ပြီး ဆီးအောင့် ခြင်းကို ပျောက်စေသည်လို့ ဆိုပါတယ်၊ တစ်ချို့တောကမြန်မာတွေမှာ တိုင်းရင်းဆေးအသိရှိတယ် ပြောရ မလားဘဲ ငါးတိုင်းကိုမစားကြပါ၊ ငါးသလောက်ကို တက်သည်ဟု သိပ်မစား၊ အဖောအရောင်ရောဂါရှိလျှင် ငါးရံ့ မစား၊ နေမကောင်းလျှင် အကြေးပါသောငါးကို မစား၊ ကဘီလူးငါးစားလျှင် အဖျားတတ်သည်ဟု ယူဆမှု့များ ရှိနေကြပါသည်။
သွေးယားရောဂါရှိသူများအနေနဲ့ ငါးပတ်၊ ငါးရံ၊ ငါးဖယ်အောင်း(ငါးဖန်းမ) တို့သည် ယားနာ၊ အရေပြားရောဂါ ကို ကြွတက်စေတတ်သဖြင့် သတိထားဆင်ခြင်စားသုံးသင့်ပါသည်။
ငါးလူး၊ ငါးလဲ သည်လည်း ၀မ်းမီးတောက်စေသည်၊ အစာကြေစေသည်၊ သည်းခြေငြိမ်းစေတတ်သည်၊ သွားများ ကို ခိုင်မာစေပါတယ်၊ ငါးမြွေထိုးကို မဆာလာနှင့်ရောချက်စားလျှင် ၀မ်းကိုက်ရောဂါ အမြစ်ပြတ်ပျောက်စေပါ တယ်၊ ငါးမြွေထိုးသည် သလိပ်နာ၊ သည်းခြေနာ၊ ၀မ်းကိုက်ရောဂါ၊ ဆီးဝမ်းအောင့်သော ဝေဒနာနှင့် ညောင်းညာ နာတို့ကို ပျောက် စေတတ်၏၊ ထိုအတူ ငါးဖယ်သည်လည်း ဆီးအောင့်နာကို သက်သာပျောက်စေပါတယ်၊ ဒါကြောင့်တိုင်းရင်းဆေးအဆိုမှာ “၀မ်းကိုက်လျှင် ငါးမြွေထိုး၊ ဆီးအောင့်လျှင် ငါးဖယ်´´ ဟုမှတ်သားထားကြ ပါတယ်၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ နှင့် လေဖြတ်သူတွေမှာ ငါးအစားနည်းကြောင်း ဒါမှမဟုတ် ရေခဲရိုက်ငါး များစားဖြစ်တာများကြောင်းတွေ့ရပါတယ်၊ ရေခဲကြာကြာရိုက်ထားသောငါးမျာတွင် အာဟာရဓာတ် ကြွယ်ဝမှု့ နည်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ လေဖြတ်ခြင်းကင်းအောင်တော့ ခေါင်းတစ်ရာငါးဆိုတဲ့ ငါးသလဲထိုးအိုးကပ်လေး ကို ခံတွင်းမြိန်မြိန်ဖြစ်အောင် ချဉ်ဟင်းလေးတစ်ခွက်နဲ့ များများသာစားခြင်းသည် ငွေကြေးကုန်ကျမှု့နည်းပြီး ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အကျိုးပြုသော မြန်မာရိုးရာ အစားအစာအနေနှင့် တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။
ဒါကြောင့် ငါးများများစားပါ လို့ဆိုချင်ပြီး၊ မည်သည့်အချိန်မှာ ဘယ်လိုငါးတွေကို ရွေးချယ်စားရင် ကိုယ့်ခန္ဓာနဲ့ ကိုယ်အတွက် အရွယ်အတွက် သင့်လျော်မလဲ သိရအောင်လေ့လာဖတ်ခဲ့သမျှတွေထဲကပြန်လည် လို့မျှဝေရေး လိုက်တာပါ။
ဘယ်ငါး က ဘယ်လို ဆို တာ သိရလို့ ဗဟုသုတ ရပါတယ်။ မကြာ ခဏ စား ဖြစ်တဲ့ ငါးကြင်း က လူနဲ့ တည့် တဲ့ ငါး ဆိုတာ ခုမှ သိတယ်။ ငါး သလောက် ကတော့ မတည့် မှန်း သိသိ နဲ့ ကို အကောင်ကြီး ကြီး များတွေ့ လို့ ကတော့ မ၀ယ်ပဲ မနေ နိုင်ဘူး။ငါးလေး အိုး ကပ် ချက် ကတော့ အရမ်း ကြိုက်တယ်။
ငါး ရိုး စူးပြီး သေ မလို ဖြစ်တုန်း ကတော့ နေ ပြန်ကောင်း သွား ရင် ဘယ်တော့ မှ ငါး မစား တော့ ဘူး လို့ တွေး မိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်အသားတွေ သိပ် မကြိုက် လှ ပဲ ငါး ၊ ပုစွန်ပဲ ကြိုက် တော့ ပြန်စား ဖြစ်တာပါပဲ။ ပင်လယ်ငါးတော့ မစားတော့ဘူး။ ရေချို ငါး တွေ ပဲ သေချာ သတိ ထား စားတော့ တယ်။
မွန်ကစ် စားနေ.. ကြိုက်တဲ့ငါး အမျိုးအစားတွေက လူနဲ့ တည့်တဲ့ ငါးတွေဖြစ်နေလို့ တော်သေးတယ်…
ဗဟုသုတ တိုးပွားစေလို့ ၀မ်းသာစွာ ဖတ်ရှုအားပေးသွားပါတယ်နော်…..
ဦးဆုံးမန့်သူ မိုချိုရေ ကျေးဇူးနော်။ အရိုးက အခန့်မသင့်လို့စူးတာပါ ငါးတော့စားပါဗျာ ကျန်းမာရေးအတွက် အသားထက်ပိုပြီးသင့်လျှော်ပါတယ်။ ခင်ခ အသားစားမလား ငါးစားမလား ဆိုပြီး ပိုစ့်တောင်ရေးခဲဖူးပါတယ်။
( အဲဒီ ပိုစ့်လင့်က – http://myanmargazette.net/143580/health-fitness )
မွန်ကစ် စားနေ ကြိုက်တဲ့ငါးက တည့်တဲ့ငါးဆိုရင်တော့ ဆက်စားပေါ့ဗျာ၊ ကွန်မန့်အတွက်ကျေးဇူးနော်။
ငါးသလဲထိုး အိုးကပ်လေး ကြိုက်တယ်…
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီတယ်ဆိုတော့ ခဏခဏ ချက်ဦးမှာ..
ငါးပေါင်းကြော်လေးကြော်ထားတာလဲ Post တင်လိုက်ဦးမယ်…
ငါးသိပ်မကြိုက်ပေမဲ့ ငါးသလဲထိုးတော့ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်………ခက်တာက အဲဒီငါးလေးတွေက
မိုးရာသီကလွဲလို့ ကျန်ရာသီမှာ ကျွန်မနေတဲ့ မြို့မှာက မရှိသလောက်ရှားတာ …. :buu:
ငါးကတော့ အရင်ထဲက အကုန်ကြိုက်လို့ အကုန်စားတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းမှ ဆင်ခြင်ဖြစ်တာ။ ခုတော့နည်းနည်းချင်းစီ ပြန်စားနေပြီ။ အသားတွေ ၀ါးရင် ညောင်းလို့ စားလွယ်တဲ့ ငါးကို ပိုစားဖြစ်တာ။
ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ စားရတာ ပိုအားရှိတာပေါ့။
မအိရေ ငါးသလဲထိုး အိုးကပ်ကြိုက်လို့ ခဏခဏစားမယ်ဆို ချဉ်ရည်လေးနဲ့ တွဲစားနော်၊ သူကတက်စာမို့ အချဉ်လေးနဲ့ထိန်းစေချင်တာပါ ပိုစ့်ထဲမှာလဲ ရေးထားပါတယ် ခင်မင်စွာဖြင့် သတိထပ်ပေးတာပါနော်။
မမေရေ အဲဒါဆို အဲဒီငါးစားရဖို့ မိုးရာသီမျှော်ရမှာပေါ့နော်။
အသားတွေ ၀ါးရင် ညောင်းလို့ စားလွယ်တဲ့ ငါးကို ပိုစားဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်မယ် မမယ်ပုရေ၊ ငယ်ငယ်တုန်းက အသားဘဲစားချင်တာ ငါးဆိုကြော်ပေးတာလွဲပြီး မစားချင်ဖူး၊ အခုအရွယ်ကျတော့ အသားသိပ်မစားချင်ပြန်ဘူး ငါးပိုစားချင်ပြန်ရောဗျာ။ ကြော်ကြော် ချက်ချက်ပါဘဲ။
နယ်မှာနေတဲ့သူငယ်ချင်းကပြောတာတော့ သူတို့ဖက်မှာ ရင်ပေါင်စာ(စာလုံးပေါင်းအမှန်မသိပါ)လို့ခေါ်ပြီး ရန်ကုန်ကငါးလေးတွေလိုအရိုးမရင့်ဘဲဝါးစားရင်ရတယ်..သိပ်ချိုတယ်လို့ပြောသံတော့ကြားဖူးပါရဲ့.
ဒန်ပေါက်၊ အုန်းထမင်း၊ ရေခဲမုန့် အကြိုက်တွေချည်းပဲ ခဏခဏစားဖြစ်တယ်
ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့ ငါသလဲထိုးလဲကြိုက်တာပဲ ကျော်စားရင်ပိုတောင်ကြိုက်သေးတယ်
ငါးသလဲတိုးကို ပိုကြိုက်တယ်..ဒါပေမယ့်သူက အရမ်းညှီတယ်..ချက်တတ်မှ …
ပြီးတော့ စိမ်းနေတဲ့အရှင်ကိုချက်မှ ပိုအရသာရှိတာဆိုတော့ ငရဲတော့အများသားနော် ..
ငါးဆို ကြော်ရင် အကုန်ကြိုက်။
ဒါနဲ့ အကုန်သိ ကိုခင်ခကို မေးပါရစေ။
ရေသူမက ဘာငါးအမျိုးအစားတုန်း ဟမ်။
ရေသူမ ဆိုတာ တစ်ကယ်ရောရှိလားလို့ မခိုင်ဇာဝင်းကို အရင်ပြန်မေးရပါလိမ့်မယ်။
တက္ကသိုလ်မှာ သတ္တဗေဒဘာသာရပ် သင်ယူတုန်းကလည်း မသင်ခဲ့ရဖူးမို့ပါဗျာ။
jullies cezer ကင်တဲ့ငါးအမျိုးအစားပေါ်မှာဘဲမူတည်မှာပါ။ ကျန်းမာရေးရှု့ထောင့်အရတော့ ကင်စားခြင်းကို အားပေးလေ့မရှိဘူးလေ၊ အကင်တွေဟာ ကင်ဆာဖြစ်စေမှု့ ပိုများစေလို့တဲ့။ ဒါကြောင့် အရင်တုန်းက ငါးကိုဒီအတိုင်းကင်နေရာက အခုခဲပတ်ပြီးကင်တဲ့စနစ်တွေဖြစ်လာတာပေါ့ တိုက်ရိုက်အသားကို မတူးစေ လိုတဲ့သဘောလေ။ ဒါပေမယ် ပတ်တဲ့ခဲစက္ကူကရော ခဲပါဝင်မှု ဘယ်လောက်ရှိလဲ ငါးထဲကိုရောစိမ့်ဝင်မှု့ ရှိလား၊ ဘေးဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာတော့ သုတေသနစာတမ်း မထွက်သေးဘူးဗျ။ မိုက်ကရိုဝေ့နဲ့ ကင်ရင်တစ်မျိုး၊ မီးဖိုပေါ်ကင်ရင်တစ်မျိုး အဲလိုလည်းကွာသေးတယ်။ မိုက်ကရိုဝေ့နဲ့တော့ အကင်ဆိုင်တွေအတော်များများ က မကင်ဖြစ်ဖူးလေ၊ မီးနဲ့ကင်တာတော့ ကျန်းမာရေးရှု့ထောင်အရ အားပေးထားတာမရှိပါခင်ဗျ။ ဒါပေမယ့် စားဖြစ်နေကြတာဘဲလေ။
ငါးလေးဆို ‘ငါးသလဲထိုး’ တစ်မျိုးပဲ သိပြီးစားတာ။ ကြော်ပဲစားတာ။
ငါးချက်က အိမ်မှာကြိုက်တဲ့သူက တစ်ဝက်ပဲရှိလို့ စားခဲတယ်ရှင့်။
‘ငါးသလဲထိုး’ စားပေမယ့် နော်ကတော့…ဟဲဟဲ…ဆင်းရဲသားလည်း မဟုတ်ဝူး…
လယ်သမားလည်း မဟုတ်ဝူး…မြစ်နား၊ချောင်းနား နေသူလည်း မဟုတ်ဝူး…
သူချေးပါ…ဟိုတစ်လောက ၀ယ်တာ ၁၀သား ၁၂၀၀တောင် ပေးရတာ..
ပုဇွန်ထုပ်လတ်ဈေးနီးနီးပဲ..အမြင့်ဆုံးဈေး ၁၄၀၀ ထိတောင် ပေးဝယ်စားဖူးသရှင့်..
ငါးကို သူ့အမျိုးအစားနဲ့သူ ဘယ်ငါးပဲစားစား အကျိုးကျေးဇူးရရှိတာ သိရတဲ့အတွက် အလွန်ပဲ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ မနောကတော့ ငါးဆိုသိပ်မစားဖြစ်ဘူး။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ခေါင်းတစ်ရာသားလို့ခေါ်တဲ့ ငါးလေးဟင်းတွေဘာတွေအိမ်ကစားခိုင်းတယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ အရိုးများတယ်လို့ဘာတို့လုပ်ပြီး ဆက်မစားဖြစ်တော့ဘူး။ တချို့ငါးတွေက အနံ့နဲ့ညှီလို့ မစားချင်ဘူး။ ကြော်ပြီး ပြန်ချက်ရင်တော့ စားဖြစ်ပါတယ်။ ငါးကျီးကြော်ဆိုရင်တော့ အရမ်းကြိုက်တယ်။
ငါးလေးအိုးကပ် လေမဖြတ်လို့ တိုင်းရင်းဆေးနည်းက ဆိုထားပါ၍ စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်လို့—။
လေးခင်ခရေ ငါးဆိုကြိုက်ပြီးသားပဲ ဒါပေမယ့်ငါးကြင်းလောက်ပဲချက်စားဖြစ်တာ။
ငါးအစိုချက်ကိုပိုကြိုက်တယ် ငါးသားပေါက်လေးတွေကြော်တာ အိုးကပ်ချက်တာကြိုက်ပေမယ့်
အရမ်းကိုတန်ဘိုးရှိတဲ့ …ပိုစ့် တစ်ပုဒ်ပါ……
ကိုခင်ခ လို ကျန်းမာရေး နဲ့ အစားအစာတွေ အကြောင်း ရှင်းပြပေးနေသူရှိတာ အရမ်းကို တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
စာရေးကလဲ ကောင်းတာမို့ မပျင်းရဘဲ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငါး ကတော့ ဒီမှာ ပင်လယ်ငါးတွေဘဲ မို့ ကိုယ့်ပြည်ကိုယ့်ရွာကို လွမ်းတဲ့ အထဲ မှာ ငါး၊ ပုဇွန် လဲ ပါတယ်။
အဲဒီ ငါးသေးသေးလေး တွေ ကို အရမ်း ကြိုက်ပါတယ်။
ကြားဖူးတာ (အဖေ့ ပြောတာထင်တယ်)
သူတို့ ငယ်ငယ်က ငါးသလဲထိုး တွေ ဖမ်း ပြီးတော့ နွားနို့ အပြည့်ရှိတဲ့ ခွက်ထဲ ထည့်တော့ ငါးတွေ က နွားနို့တွေ သောက်ပြီး မာလကီးကုန် တော့ ကြော်စားတာ အလွန်အရသာရှိသတဲ့။
အရင်ကတော့ သွားရည်ကျ ခဲ့ပေမဲ့ အခုတော့ အဲဒီလိုပုံစံ ကို မစားရက်တော့ ပါဘူး။
တကယ်လဲ ငါးကိုပဲ အများဆုံးစားဖြစ်ပါတယ်…။
ထူးခြားတာတခုက ယောက်ျားတွေက ငါးသိပ်မကြိုက်ကြတာများတယ်..။
အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်သား/မြို့ကြီးသား တွေပေါ့….
အဲဒါ စားကောင်းအောင်စိတ်ရှည်လက်ရှည် ချက်မစား ချက်မကျွေးနိုင်ကြလို့နဲ့တူတယ်။
ငါးခြောက် ခရမ်းချဉ်သီး ဆီပြန်
နဲ့ … စားသောက်ဆိုင်တွေမှာရသမျှ ငါးဟင်းအကုန်ပဲ…
အဲဒါနဲ့တောင် လူတွေ(ယောက်ျားတွေ)ငါးမကြိုက်ကြတာ ကျုပ်တော့ အံ့သြတာပဲ…….
ပိုစ့် ပိုင်ရှင် ကိုချီးကျူးရင်း နဲ့ စားချင်တဲ့ ငါးဟင်းလေးတွေ ထပ်ဖြည့် လိုက်ပါ့မယ် ဦးဦးပါလေရာ ရေ့. ….။
ငါးတန် (မြစ်) အချဉ်ချက်
ကျုပ်တော့ မအံ့သြဘူး..ကျုပ်အစ်ကိုတွေက ငါးမကြိုက်တာကမှ နှစ်မျိုးနှစ်စားထဲကို
‘ ငါးကြော်မကြိုက်၊ဂဠုန်မိုက် ‘ နဲ့ ‘ငါးချက်မကြိုက်၊ဂဠုန်မိုက် ‘ တွေမို့ပဲ…
ကျုပ်အစ်ကိုတွေက တနင်္ဂနွေသားတွေချည်းမို့ ကျုပ်က ဒီလိုပြောနေကျလေ..
ဒါကြောင့် ကျုပ်လည်း ငါးကြော်နဲ့ငါးချက်ကြား အမြဲဗျာများ စိတ်ညစ်ရတယ်လေ..
ဟိ..ဟိ…အမှန်ရေးပြီး နောက်တာနော်..ဗွေမယူပါနဲ့… :mgreen:
.. မျက်လုံးအထက်မှာ.. သံချောင်းနဲ့ရိုက်…။
(တချို့ကတော့.. ခေါင်းကိုရေစိုအ၀တ်နဲ့အုပ်တယ်.. ငါးက.. ဘာမှမမြင်ရရင်. လုံခြုံတယ်ထင်ပြီး..မရုံးကန်ဘူး)
ကျောဖက်ကနေ… ဓါးဦးစိုက်ပြီးအရိုးတလျှောက်.. ဇွိဆို အမြီးထိဆွဲချ…
နောက်တဖက်လှန်… ဓါးဦးစိုက်ပြီးအရိုးတလျှောက်.. ဇွိဆို အမြီးထိဆွဲချ…
ပန်ကန်ပေါ်တင်… ။ ပန်းပုံဖေါ်..အလှဆင်.. အော်ဒါမှာသူရှေ့အေ၇ာက်ပို့..
ဆာရှိမိ..ဆုရှိတွေမိန်းကလေးခန္ဓာပေါ်တင်စားတာရှိသေးတယ်.. 女体盛り လို့ခေါ်ပါတယ်.။
စားသူတွေ.. အသက်ရှည်မလား…တိုမလားမသိ.. :528:
ပန်းတွေနဲ့ ငှက်ရုပ်လေးတွေ တင်ထားတဲ့နေရာတွေကို စားချင်ဒယ် လှီးပေး………. :harr:
အပေါ်ပုံက ရွံစရာကြီး သူကြီးရယ်…။
ပြီးတော့ အဲလိုစားရင် မ၀ါးပဲ မြိုမြိုချမိနေလို့ အစာမကြေဖြစ်ပြီး မာလကီးနေမှဖြင့်….
ကျွန်တော့်သဘောကတော့ တမျိုးပြီးမှ နောက်တမျိုး အချိန်ယူပြီးဖြည်းဖြည်းစားသင့်ပါကြောင်း…. :harr:
သူကြီးရေ ကြံကြံဖန်ဖန် ရောင်းတတ်ပါပေ့ဗျာ။ တစ်ချို့စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ သီးသန့်အခန်းတွေရှိ တတ်တယ်၊ သူကြီးရေ အဲဒီဆိုင်မှာကော သီးသန့်အခန်းရှိလား? ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်——–။
nyotaimori လို့ Google Images မှာရှာကြည့်…
ဂျပန်မှာ ယာကုဆာတွေ.. ညစာစားပွဲမျိုးမှာ.. အဲဒီနည်းနဲ့..စားကြလုပ်ကြပုံပေါ်ပါတယ်..။
မိန်းကလေးကိုယ်ရဲ့.. ချိုင့်တဲ့နေရာထဲ.. ဆာကေး..ရိုးချုးအရက်ထည့်ပြီး.. စုတ်သောက်တာတောင်ရှိသေး..
တပွဲတပွဲ အင်မတန်ဈေးကြီးတယ်..။ ဈေးကြီးဆို.. ငါးကိုင်ပုံဖေါ်ရတဲ့.. စာဖိုမူးတွေကို.. ပါတီ/ဒင်နာလုပ်တဲ့နေရာတခါတည်းဖိတ်ပြီး.. တရက်ကြိုလုပ်ကြရတာကိုး..
ဂျပန်မှာနေတုံးက. အဲလိုပွဲမျိုး.. ဓါးသမားအကူအဖြစ်တောင်လုပ်ပေးဖူးသေး..။
ဂျပန်တွေက.. လျှာ..ပါးစပ်နဲ့အရသာခံရုံတင်မဟုတ်.. မျက်စိနဲ့ပါစားတတ်ကြတာမို့.. ဒီလိုဟာတွေဖြစ်လာတာထင်ပါတယ်..
မြန်မာတွေက.. တဆင့်တက်ပြီး.. နားနဲ့.. နားထောင်ပြီး.. စားနည်းတီထွင်ဖို့ကောင်းတယ်..။
ဥပမာ..။ ကြက်ကျော်ချထားပြီး.. ဘေးကနေ..
♪♬♪.. ကိုဘေးနွားကင်ကြီးပါနော်.. ဘီယာနံ့ သင်းသင်း.. အသားအိအိနဲ့..။ ♬♪♪
♪♬♪.. မိန်းပြည်နယ်က.. လော့ဘ်စတာကြီးဖြစ်ပါတယ်.. ♪♬♬♪
သဂျီးတို့ကတော့ ဂယ်. မလွယ်ဘူး
အဲ့မှာ လုပ်တုန်းကရော. ရုံးပတေသီးတေ ဆွဲတာပဲလားဟင်င်င်င်င်
စိုးတယ် စိုးမိတယ်. စိုးထိတ်မိတော့တယ်
လေးလေးခရေ ….. ဗဟုသုတတွေ ထပ်ရပြန်ပြီ ….. အဖေက ငါးဖယ်အောင်ကို တအားကြိုက်တယ် … အဖေမှာက ဆီးချိုရှိတယ် ယားလည်းယားတတ်တယ် စားနေတဲ့အစားအသောက်နဲ့ရောဂါနဲ့မတည့်တာကို အခုမှသိရတယ် ……….
မမခိုင်ရေ ငါးဖယ်အောင်းက အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေလည်း သိပ်မစားသင့်သလို၊ အမျိုးသမီးများ ရာသီသွေးပေါ်ချိန်မှာလည်း မစားသင့်ဘူးခင်ဗျ။ ထပ်ဖြည့်ပြောတာပါ။
ငါး ဟာ အကောင်းဆုံး စားစရာပါပဲ
အမှန်ပါဘဲ ဆရာပေရေ၊ သွားကောင်းလည်း အသားတွေမ၀ါးချင်ရင် ငါးစားဖြစ်ကြပါတယ်။
ခက်တာက အိမ်က ကလေးနှစ်ကောင် ငါးမကြိုက်ဘူးလုပ်နေလို့
သွားစားချင်သား..ဒါပေမဲ့ ဦးပါ ပြောသလို နင်နေမှာတော့စိုးတယ်ဗျို့..
ကိုကြီးမိုက်ရေ ကျွန်တော်သူကြီးကို အပေါ်ကွန့်မှာ မေးထားတယ် သီးသန့်ခန်းရောရှိလားလို့၊
ရှိရင် ရွာကလိုက်ချင် သွားချင်သူတွေစုပြီး ၀ိုင်းဖွဲ့သွားပြီး သီးသီးသန့်သန့်လေး စားရအောင်ပါ။
ခင်ဗျား ဇွန်းကောင်းကောင်းရှိမှ စားလို့ ဖြစ်မှာနော်
အိမ်ကအဖွားက ငါးဘတ်ကိုမွှေချက်တာကို အားပါးတရစားရင်ကျနော်က ညှီနံ့မကြိုက်လို့မစားဘူး။
ကျနော်ကြိုက်တာကတော့ ငါးသေးသေးလေးတွေ(ငါး၊ဇင်ရိုင်းမပါ)ကို အိုးကပ်ပြီး တစ်ဘက်ခြမ်းကနီနေအောင် မီးအေးအေးနဲ့ချက်
ချဉ်ပေါင်ရွက်ချဉ်ရေဟင်းနဲ့ တီးလိုက်လို့ကတော့ မိုက်မှမိုက်။
နောက် ငါးရံ့ အကောင်သေး အနေတော်လေးတွေကို ကျွတ်နေအောင်ကြော်
ငါးရုတ်သီးအခြောက်ကို ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ရောပြီး မညက်တညက်ထောင်း
ပြီးဆွဲလိုက်လို့ကတော့ ရှောကနဲ့ နှစ်ပန်းကန်။
နောက်ငါးသလောက်ကို ရှောက်သီး သုံးပြီးပေါင်း.
ဘူးသီးချဉ်ရေ ပဲငံပြာရည်ကို ငရုတ်သီးနဲ့ချက် ကြက်သွန်ဖြူကိုအကွင်းလိုက်ကြော်ထားတာထည့်ပြီး
ဆက်ပြောရင် ရေချိုငါး မြစ်ငါးဘဲစားကောင်းတယ်
မွေးမြူရေးငါး ဇလားဗီးယားကတော့ မှော်စော်ဒိုက်စော်နံတော့ မစားချင်ဘူး
မေ့သွားလို့ ငါးခူကျော်ရင်လဲ ကြိုက်ပါ၏.
ကလေးတွေ ပင်လယ်ငါးစားရင် ဥာဏ်ကောင်းတယ်ဆို….
ပင်လယ်ငါးက ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးရှိမှ သင့်တော်တာလဲ….
ရန်ကုန်မှာတော့ ရေခဲရိုက်တွေဘဲ အမြဲရှိတာလေ….
သားတွေက ငါးအရမ်းကြိုက်တော့ ဘယ်လိုငါးမျိုးကို ပိုကျွေးသင့်ပါသလဲ….
ကိုခင်ခရေ…. တလက်စတည်း အကြံလေးလည်းပေးပါအုံးနော်….
အခုလောလောဆယ်တော့ ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ပရင့်တွေထုတ်သွားပါပြီ….
သူကြီး ပြထားတဲ့ ပုံ ထဲက…အစားအစာတွေတော့..
ထွန့်ထွန့်လူးတဲ့ ငါးပြေမကိုစားရင်ကော ဘယ်လိုအကျိုးဖြစ်မလဲ ဗိန်းဆရာရေ
ကိုဘဲဥ … ပန်းပွင့်လေးနေရာမှာ ဘဲဥလေးတင်ထားရင်ကောင်းမှာပဲလို့ မတွေးမိဘူးလား …
Thit San Khant MC says:
ငါးသလောက် ကြိုက်တယ်ခင်ဗျ ငါးလေးအိုးကပ်လဲ ကြိုက်တယ်
ကင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်ငါးမဆို ကြိုက်တယ်
ကျုပ်သိသလောက်… ငါးက..ဘာငါးစားစား.. လူနဲ့တည့်ပြီး.. ကျမ်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်တာပါ…
သူ့အဆီ(ငါးဆီ)က.. သွေးထဲမှာမပျော်ဝင်တဲ့.. ၀က်..အမဲဆီတွေကို.. ဖျော်ချပေးနိုင်တယ်တဲ့..။
ငါးကိုအမျိုးစုံလုပ်စားတဲ့ ဂျပန်တွေ.. ကမ္ဘာမှာလူ့သက်တန်းအရှည်ဆုံးတွေပါ…။
ဦးကြီးခ ရေးတော့.. ပိုတိတိကျကျပေါ့လေ..။
ခေတ်မှီသူတိုင်း ပင်လယ်ငါးစားကြသည် ဆိုပြီး.. မြန်မာတွေပင်လယ်ငါးစားအောင်.. နဲ့ကြော်ငြာစာသားလုပ်ပြီး တိုက်တွန်းခဲ့တာ..
ခုထိ.. မြန်မာတွေ.. ငါးစားချို့တဲ့နေတုံး..
ကြားထဲက.. အမဲသားမစားရ.. ၀က်စားနတ်မကြိုက်.. သက်သတ်လွတ်သမား.. စတာတွေထလုပ်နေကြတော့… အသားမစား.. ငါးမစားတွေကနေ..
မွေးလာတဲ့..မွေးလာမယ့်ကလေးတွေများ.. နောက်ဆို.. ဦးနှောက်တောင် ကျပ်ပြည့်သုံးနိုင်ပါ့မလား.. တွေးနေမိတာ..
Fish: Friend or Foe? – Harvard School of Public Health
http://www.hsph.harvard.edu › The Nutrition Source
Fears of contaminants make many unnecessarily shy away from fish. Fish isavery important part ofahealthy diet. Fish and other seafood are the major sources …
အောက်က၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ.. မာကျုရီပါဝင်နှုန်းနဲ့.. ငါးအမျိုးတွေခွဲပေးထားတယ်..
စားသောက်ဆိုင်မှာအလုပ် လုပ်ရင်း ငါးကြိုက်ပီး ငါးငတ် တဲ့ သူတွေထဲမှာ ဘဆွေထိပ်ဆုံးက ပါတယ်…
ဆိုင်ကလည်း မကြွေး ကိုယ်တိုင်လည်းဝယ်မစားနိုင် တဲ့ဘ၀ ရောက်နေပေါ့ခင်ဗျ။
ဈေးလည်းကြီး ၀ယ်ရလည်းခက် နဲ့ မစားရတာ ကြာပေါ့..
”ငါး ကတော့ ဒီမှာ ပင်လယ်ငါးတွေဘဲ မို့ ကိုယ့်ပြည်ကိုယ့်ရွာကို လွမ်းတဲ့ အထဲ မှာ ငါး၊ ပုဇွန် လဲ ပါတယ်။”
ရေချို ငါး ရှားပါးတဲ့အပြင် ပင်လယ်ငါးကလည်း လက်ဝါးလောက်လေး တစ်တုံး ကို ၄ပေါင် ၅ပေါင် လောက် ပေးဝယ်ရတယ်..တစ်ခါစား စာတောင်မရှိဘူး..
ကြက်ကင်ပြီးသား တစ်ကောင်လုံးမှ ၃ပေါင်ခွဲ၊ ၀က်သား တစ်ကီလို မှ ၃ပေါင် ကို သုံးရက်စာလောက် စားရတော့ ကြိုက် လည်းဝယ်မစားဖြစ်တော့ဘူး။
တစ်ခါတစ်ရံ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေ ဆုံလို့ မုန့်ဟင်းခါးချက်စားကြ မယ်ဆို Sheffield ပြေးပြီး ငါးခူဝယ် ရတယ် အေးရှန်းဆိုင်တွေမှာ ရတတ်တယ် ..ဒါပေမယ့် ဈေးကလည်း ခပ်လတ်လတ် တစ်ကောင်ကို ဆယ်ပေါင်လောက် ပေးရပြီး စားရိတ်ပါနဲ့ ဆို နှစ်ဆယ်လောက်ချောပြီ…
ဦးပါရဲ့ ငါးဟင်းတွေ၊ကိုပေါက်ရဲ့ငါးဟင်းတွေ၊လုလင်ရဲ့ငါးဟင်းတွေ ဖတ်ပြီး သွားရေ မယိုပဲ မျက်ရေ စောက်စောက်ယိုသွားတယ်။
အဖွား က အရင်တုန်းက ထန်းတစ်ပင်၊ညောင်တုန်း၊ချောင်းဝ၊ဘောလယ်၊အလိန်လယ် ဘက်က အင်းလုပ်တဲ့၊ငါးဖမ်းတဲ့သူတွေ ကို ငွေစိုက်ထုတ်ပေးပြီးအင်းပေါ်ရင် အမြတ်ခွဲယူတဲ့ အလုပ် လုပ်ဘူးတယ်။
အိမ်မှာ ဘယ်လောက် ငါးစို။ငါးခြောက်၊ငါးပိ(ရေကျို) ပေါလိုက်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားသာကြည့်ပါဗျာ..
ခုတော့ ငတ်နေရတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အရီးလတ်ပြန်တော့ လက်ဆောင်ရထားတဲ့ ငါးရံ့ခြောက် တစ်ပြား ပုလင်းထဲမှာ ဆီစိမ်ထားတာ ခုထိမကုန်သေးဘူး မစားရက်လို့ အနံ့ပဲရှူ တယ်။
ဆိုတာ ဒီလိုရှိမယ် သူကြီးရေ ရွာနားကမြက် ရွာနားမစားဆိုသလို မြင်နေကျမို့ အထူးအဆန်းမထင် မစားကြသလို၊ တစ်ချို့ရှေးရိုးစွဲစိတ်နဲ့ ပင်လည်ငါးစားရင်ဘဲ သွေးသားမတည့် အဖုပိတ်ထွက် နူကြမယ် ထင်တာလဲရှိတယ်လေ။ တကယ်တော့ ငါးမှာပါတဲ့ အဆီဟာ လူနဲ့တည့်ပါတယ်လေ။
ကိုဘဆွေရေ မြန်မာက ငါးလှလှ ငါးကြီးတွေ အမျိုးအစားကောင်းငါးတွေလည်း နိုင်ငံခြားပို့ကုန်ဖြစ်လို့
ပြည်တွင်းဈေးလည်း အရင်ကထက်ကြီးလာပါပြီဗျ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အသား နဲ့ ငါး မှာ ငါးစားချင်းက ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုအကျိုးရှိလို့ ငါးများများ ရရင် ရသလို စားသင့်ပါတယ်ဗျ။
ပြန်လည်ဖတ်ရှု့ ကွန်မန့်ပေးသူများ ကျေးဇူးဗျာ။